Maxaa kala socotaa qiimaha uu ka leeyahay dalkaani Iswiidhan keek-ga loo yaqaano “Kanelbulle”? | Somaliska
Keek-ga qorfaha ka sameeysan ama la yiraahdo Kanelbulle ayaa waxaa uu ka mid yahay mac macaanada dalkaan caanka ku yahay ee la cunayey tan iyo sanadkii 1920-kii.
Waxyaabaha dha-dhanka leh ee laga dha-dhansan karro ayaa waxaa ka mid ah qorfaha, ka sokoow in bur, ukun, heyl qamiir iyo sugab asal ahaantiisa ka kooban yahay. Hadana saas oo ay tahayna sanad kasta marka la gaaro bisha oktoobar afarteeda ayaa guud ahaan dalka oo dhami waxaa laga xusaa maalintaas loo asteeyey in la cunno.
Arbetsförmedlingen oo dad badan siisay lacago qalad ah
Saabir Bunka says:
illaa hadda micnahiisa gaarka ah ma fahmin.
October 7, 2016 at 00:44
Ikraam cali, Waxaan filayaa inaad kahesho sameyska kannelbullka🍩🍰
Qoraalkaan, danta umada somaliyed ugu jirto waamaxay aniga ma fahmin .